Piper's Rise Foreword — Trip LEE - OFISIALY SITE
Fa ny boky dia matotra. Izany sarobidy ny matotra. Izany manaja taona. Trip dia hendry mihoatra noho ny taona. Hitany efa ny zavatra taona no hampianatra. Rehetra fofonainareo dia tahaka ny fanomezana. Isaky ny indray mipi-maso ny fitokisana.
"Fandaniam-potoana no adala. Tahaka mirehitra vola. Ny hany fahasamihafana dia afaka manao bebe kokoa vola, fa ianao dia tsy hanao bebe kokoa. "
Aho hoe izany ny fanehoana fanajana ny zavatra zava-dehibe. Ny fiainana sarobidy. ary fohy. Trip miantso anao mba hiaina noho izay zava-dehibe. To hiaina erỳ, amim-pifaliana. Ankoatra adaladala. Ankoatra mangatsiaka sy nahira-tsaina.
Raha toa isika mba hitsangana eo amin'ny Himalayan lalana ho any amin'ny voninahitr'Andriamanitra, dia tsy maintsy mahafantatra ny lalana fa tsy solafaka ny. "Shallow fakany hitarika ho shaky footing, ka raha te ho mafy orina tsy maintsy handeha lalina. "Trip nitondra anareo any. Mandehana lalina aminy, mba ho any ambony. Mitsangàna.
MicahKelley • Janoary 26, 2015 amin'ny 8:11 aho • navalin'i
Io aloha no tena tsara ary manantena aho indray mandeha mamaky ny boky, mba hitsangana ho lehibe kokoa sy lalina kokoa avo lalina ao amin'ny Tompo.
Cristella • Janoary 26, 2015 amin'ny 10:41 aho • navalin'i
Inona avy ny Great
I antoka cant miandry hamaky ny boky Mitsangàna
Anie ny fahasoavana sy ny Fiadanana ho anareo Trip
ChriseldaDirrim • Janoary 26, 2015 amin'ny 12:07 PM • navalin'i
Te-hamaky azy io izao!
Nicholas Theron saha • Janoary 26, 2015 amin'ny 1:26 PM • navalin'i
Manaiky aho tsy misy teboka amin'ny fandaniam-potoana. Fa aza adino ny mankafy ny fotoana. Ny fananana mahafinaritra dia tsy ratsy ny fomba hifalifaly. Ve ianao mahazo ny fahafinaretana avy amin'ny sasany ny fanaintainana hafa. No hanisy ratsy sy ny halatra amin'ny olon-kafa hanome anao fifaliana sy fahafinaretana. No mihazona koa no zazalahy an'Andriamanitra teo. Ve fa ny hanome hery anao ny hanohy. Ve fa hanome anareo ny lehilahy fihetseham-po. Ny hoe tena lehilahy. Dia manamboatra ny zavatra enta-mavesatra ny fiainanao noho ny antony ratsy, na ny hamela anareo ho jamba. Nilaza Zanak'Andriamanitra iray hafa tsy hitory ny ratsy. Na tsy hihira. Na mihazakazaka amin'ny sasany izay mety manana ny hery mba hanampy anao eo amin'ny lalindalina kokoa ny faritra mainty mandeha ara-panahy. ny fijoroanao ho vavolombelona. Ny antony manaraka an'Andriamanitra ho akaiky sy mafy rehefa manao. Mihazakazaka isika satria fotsiny dia tsy nahita ny halalin'ny andriamanitra drafitra. Ny tena loza eo amin'ny fiainantsika. Ny tantara izay tsy mahazo nilaza. Andriamanitra dia tonga ny very. The tapaka. ny tahotra. ny voaheloka. Ny saina izay manan-tsaina. Dia nilaza fa foana izy ireo tsy tsara. Tsy mamonjy ny tsara indrindra ho an'ny intsony farany. Andriamanitra ho avy. Mety tsy ho fantatsika ny daty nefa ho avy. Ary rehefa manao isika rehetra dia hatahotra an'i Jehovah, satria fantany izay tena tsara. Fantany izay tsara indrindra. Dia hamaky ny boky, raha ny fotoana Andriamanitra anie hitahy.
voatendry John • Janoary 27, 2015 amin'ny 5:41 aho • navalin'i
Wow! Izany no tena awesome, Izaho Tsy afaka miandry ny dika mitovy. Trip, bebe kokoa ny fahasoavana sy ny vokatra eo amin'ny asa fanompoana ho an'ny fanjakana!
Burton • Janoary 27, 2015 amin'ny 4:53 PM • navalin'i
Tsy afaka miandry ny dika mitovy mialoha baiko aho mba hankany amin'ny fonenanay! Misaotra anao noho ny fanoratana Trip boky mba hanampiana ny tanora tahaka ahy.
miresaka momba: Music Alatsinainy – Mitsangàna amin'ny Trip Lee | Andry fahamarinana Fanompoana